Dongo Landfill bhurudhoza SD7HW - China Xuanhua Construction Machinery
SD7HW bhurudhoza iri 230 horsepower njanji-mhando dozer pamwe yakakwirira sprocket, simba kusuduruka nemotokari, Semi-vanachandagwinyira yakaturikwa uye hydraulic chidhiraivho. SD7HW-230 horsepower, yakakwirira sprocket bhurudhoza nokusangana pamwe modular Magadzirirwo nyore yokugadzirisa & Nokuraramisa, It Unotsigira mafuta musiyano nevezera, ari hydraulic maitiro anoita kuchengetedza zvakatipoteredza uye nokuponesa simba dzakakwirira raingova kunyatsoshanda. Safety dzakafanira mashandiro ezvinhu, yemagetsi zvichiongororwa uye ROPS kabhini pamwe yakavimbika yose qual ...
SD7HW bhurudhoza iri 230 horsepower njanji-mhando dozer pamwe yakakwirira sprocket, simba kusuduruka nemotokari, Semi-vanachandagwinyira yakaturikwa uye hydraulic chidhiraivho.
SD7HW-230 horsepower, yakakwirira sprocket bhurudhoza nokusangana pamwe modular Magadzirirwo nyore yokugadzirisa & Nokuraramisa, It Unotsigira mafuta musiyano nevezera, ari hydraulic maitiro anoita kuchengetedza zvakatipoteredza uye nokuponesa simba dzakakwirira raingova kunyatsoshanda. Safety dzakafanira mashandiro ezvinhu, yemagetsi zvichiongororwa uye ROPS kabhini pamwe yakavimbika yose quality, rakaisvonaka basa kuchenjera kwenyu wasarudza.
SD7HW hwakaderera pasi nevamwe dzakanakira muchina yakashandiswa kuti tsvina mukugadzirisa.
(kwete kusanganisira Ripper) Operation uremu ( KG) 2 5670
Ground kumanikidzwa (K Pa ) 51.96
Track geji (mm) 2235
Min. pasi Clearance (mm) 484
Dozing chinzvimbo ( mamita ³) 13.4
Chipande upamhi (mm) 4382
Max. kuchera udzamu (mm) 635
Uchitikurudzira miganhu ( mm ) 5245×4382× 3482
Nyorai CUMMINS N TA 855-C 280S10
Rated chimurenga (RPM) 2100
Rated mafuta kunwa (g / KW • h) ≤ 235
Nyorai The njanji ndiyo Triangle chimiro.
T iye sprocket rakakwirira kwakavharwa nenyama akarembedzwa.
Nhamba keriya rollers (rimwe divi) 1
W idth kuti shangu (mm) 760
Shure (Km / h) 0-4.8 0-8.2 0-13.2
Max. Hurongwa kumanikidzwa (MPa) 18.6
Pombi mhando High kumanikidzwa rachulis kupomba
T orque convert Torque convert isimba kupatsanura hydraulic-makanika mhando
S teering batira. The gozvo batira iri hydraulic chakatsikirirwa, kazhinji kuparadzaniswa batira.
Braking batira The braking batira rikazvisundira patsime, wakaparadzaniswa hydraulic, meshed mhando.
F dzi kutyaira chokupedzisira ngarurege iri mbiri-Danho yemapuraneti rutapudzo giya mashandiro, vasase lubrication.
Previous: Akakwirira-motokari bhurudhoza SD9
Akakwidziridzwa-motokari bhurudhoza SD8N
Akakwirira-motokari bhurudhoza SD9